Kukarukureta nzira yokusonesa shinda kushandiswa
Maitiro ekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa. Nekuwedzera kwemutengo wemachira mbishi zvinhu, mutengo wekusona shinda, kunyanya yekumusoro-yekupedzisira tambo yekusonesa, iri kukwirawo. Nekudaro, nzira dzazvino dzekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa inoshandiswa nemakambani ekupfeka anofungidzirwa zvakanyanya zvichibva pane ruzivo rwekugadzira. Mazhinji makambani anowanzo kuwanda pamusoro pekusona tambo, kuvhura kupi, uye haazive kukosha kwekusona tambo manejimendi.
1. Maitiro ekuverenga ekusona tambo yekushandisa
Kuverengerwa kweiyo huwandu hwetambo yekusona inowanikwa neinowanzoshandiswa nzira yekufungidzira nemabhizinesi, ndiko kuti, kureba kwetambo yekuyera kunoyerwa kuburikidza neCAD software, uye hurefu hwese hunowedzerwa ne coefficient (kazhinji 2.5 kusvika katatu kureba kwese kusona).
Chidimbu chekupfeka kusona mashandisirwo = iyo huwandu hwekusona kushandiswa kwezvikamu zvese zvehembe × (1 + chiyero cheyero).
Iyo yekufungidzira nzira haigone kunyatso kuwana huwandu hweiyo yekusona tambo. Pane nzira mbiri dzesainzi dzekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa:
1. Fomura nzira
Musimboti weiyo fomula nzira ndeye kushandisa iyo yemasvomhu geometric curve kureba nzira kune iyo yekumisikidza chimiro, ndiko kuti, kucherechedza chimiro chejometri chemakoroni akabatana-akabatana mune yekucheka zvinhu, uye shandisa iyo geometric fomula kuverenga kushandiswa kwe tambo yetambo.
Verenga urefu hwetambo yekumonera (kusanganisira tambo yekurembera kureba + huwandu hwetambo inoshandiswa panosangana chidimbu), wozoichinjisa kuita huwandu hwemasisitita pamamita ekusona, wozoipamhidzira nehurefu hwakazara yenguo.
Iyo fomula nzira inosanganisa zvinhu zvakaita sekusunga kusimba, kusona zvinhu ukobvu, yarn kuverenga, overlock kutsemura upamhi, uye urefu hwekusona. Naizvozvo, nzira yemafomula ndiyo imwe nzira yakatwasuka, asi zvakaoma kushandisa. Magadzirirwo, masitaera, matekiniki ekusona, ukobvu hwekusona (grey jira), shinda kuverenga, sisitimu, nezvimwe zvakasiyana zvakanyanya, izvo zvinounza kukanganiswa kwakanyanya pakuverenga, saka makambani haashandise.
2. Stitch-mutsetse urefu reshiyo
Tambo-tambo kureba reshiyo, ndiko kuti, chiyero chehurefu hwekusona kwekusona kusona kusvika pakureba kwekusona kwakapedzwa. Ichi chiyero chinogona kutemerwa zvichienderana neicho chaicho kugadzirwa kana kuverengerwa maererano nefomula nzira. Pane nzira mbiri dzekuyedza: iyo yekumusoro urefu nzira uye iyo yekumira kureba nzira.
Suture kureba nzira yekugadzirisa: Usati wasona, pimisa hurefu hwesuture pamutsetse wepagoda uye maka mucherechedzo. Mushure mekucheka, chiyera huwandu hwemasisitimu akaumbwa nehurefu uhwu kuti uverenge urefu hwesono pamamita. Mutsara unoshandiswa wekutsvaga.
Kusona nzira yekurembera urefu: tanga washandisa zvekusona zvemakobvu akasiyana kuti usone, wobva wadimbura chikamu nechitarisiko chiri nani, nyatsobvarura matinji, kuyera kureba kwavo kana kuyera huremu hwavo, wobva waverenga Huwandu hwetambo inoshandiswa pamamita ekusona. (kureba kana kurema).
2. Kukosha kwekuverenga kwakaringana kweiyo dosi:
(1) Huwandu hwetambo yekusonesa inoshandiswa chinhu chakakosha kumakambani kuverenga mutengo wekugadzira zvipfeko;
(2) Kuverenga huwandu hwetambo yekusonesa yakashandiswa kunogona kudzora marara uye backlog yemasuture. Kuderedza huwandu hweshinda yekusonesa kunogona kuchengetedza nzvimbo yekambani yekuverenga uye kudzikisira kudzvanywa, nekudaro kudzikisa mutengo wekugadzira uye kuwedzera mibairo yemubhadharo;
(3) Kuita kuongororwa kwekusona tambo kunwa kunogona kusimudzira ruzivo rwevashandi nezvekusonesa marongero uye mhando;
(4) Nekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa, vashandi vanogona kuyeuchidzwa kuti vachinje tambo munguva. Kana kusona kusingabvumirwe mune dzakashama dzakashama dzakadai sejean, huwandu hwetambo inoshandiswa hunofanirwa kuverengerwa zvakaringana kudzikisa zvasara zvezvikosoro zvinokonzerwa nezvikoko zvisina kukwana, nokudaro zvichivandudza Kugadzirwa;
Nekuti iyo "stitch-to-line urefu ratio" iri nyore kuverenga huwandu hweshinda, uye mhedzisiro yekuverenga ndeyechokwadi, inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira zvipfeko.
3. Zvinhu zvinokanganisa huwandu hweshinda yekusonesa
Kuwanda kwekusona tambo kunwa hakusi kungoenderana chete nehurefu hwekusona, asi zvakare zvine hukama zvakanyanya nezvinhu zvakaita sekukora uye kumonyanisa kweshinda yekusona pachayo, chimiro uye ukobvu hwejira, uye kuomarara kwekusona panguva yekusona .
Nekudaro, iyo chaiyo misiyano uye kusanduka inoita iyo mhedzisiro mhedzisiro yekushona tambo ine kutsauka kukuru. Zvimwe zvinonyanya kukonzera zvinhu ndezvi:
1. Iko kusimba kwejira uye shinda: Zvese zviri zviviri zvekusona uye suture zvine mwero wakati wekusimba. Yakakura iyo deformation deformation, iyo yakakura pesvedzero pakuverenga kweiyo huwandu hwesuture. Kuti uite kuti mhedzisiro yekuverenga ive yakanyatsojeka, zvinodikanwa kuwedzera coefficients yekururamisa yekugadzirisa micheka gobvu uye nhete yegrey ine masisitimu ehurongwa uye masisitiri ezvigadzirwa.
2. Kubuditsa: Panyaya yehukuru hwekugadzira vhoriyamu, sezvo hunyanzvi hwevashandi huchiwedzera zvishoma nezvishoma, chikamu chekurasikirwa chichava chakadzikira.
3. Kupedzisa: Kuwacha nekuaina machira kana mbatya zvinokonzeresa matambudziko ekupera kwemidziyo, ayo anoda kuwedzerwa kana kuderedzwa nenzira kwayo.
4. Vashandi: Mukuita kwekushandisa sutures, nekuda kwenzira dzakasiyana dzekushanda kwevashandi, kukanganisa kwevanhu uye kudyiwa zvinokonzerwa. Iko kushandiswa kunotsanangurwa zvinoenderana nehunyanzvi chinzvimbo uye chaicho chiitiko chefekitori, uye tsvina iyi inogona kuderedzwa kuburikidza neyakafanira mashandiro ekutungamira.
Makwikwi muindasitiri yezvipfeko ari kuramba achiwedzera kutyisa. Mabhizinesi anofanirwa kuve neyakakodzera yekusona tambo yekuverenga nzira yekubatsira kubata tambo yekusona uye kupa chirevo chekuchengetedza mari yekugadzira.